Retail Sales Specialist (For Htoukyant Branch) | Yoma Bank
Retail Sales Specialist (For Htoukyant Branch)
လုပ်ငန်းစီးပွားတိုးတက်ရန်အတွက် Retail Sales Specialist သည် အရောင်းနည်းဗျူဟာများနှင့် Customer ဝန်ဆောင်မှုအရည်အချင်းများကိုအသုံးပြုပြီး သတ်မှတ်ထားသော sales targets ကိုအောင်မြင်အောင် လုပ်ဆောင်ရန်၊
အရောင်းဝန်ဆောင်မှု (၆၀ %)
•	Customer ၏ လိုအပ်ချက်များဖော်ထုတ်ပြီး သတ်မှတ်ထားသောအရောင်းများအားရရှိစေခြင်း၊ သတ်မှတ်ထား သည့် Sales Target ထက်ကျော်အောင်မှီအောင်ကြိုးစားခြင်း၊
•	Customer အသစ်များ (New-To-Bank) များရရှိရန် တာဝန်ယူခြင်း၊ အရောင်းအတွက်တာဝန်ယူခြင်း၊ အပ်ငွေနှင့်ချေးငွေ လျှောက်လွှာများပြုလုပ်ခြင်း (အပြင်ထွက်ရောင်းချခြင်းနှင့် ဘဏ်တွင်းရောင်းချခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်း)၊
•	အပြင်ထွက်ရောင်းချခြင်းများကို Marketing အစီအစဉ်များပြုလုပ်ခြင်း၊ Events နှင့် မိမိကိုယ်တိုင်အပြင်သွား ရောင်းချခြင်း၊ လှည့်လည်ရောင်းချခြင်း၊ Customer များနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းများပြုလုပ်ခြင်း၊
•	လက်ရှိ Customer (Existing-To-Bank) နှင့် Customer (New-To-Bank) အသစ်များအားဖုန်းခေါ်ပြီး ရိုးမဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုများကို မိတ်ဆက်ခြင်း၊ ရှင်းပြခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊
•	ဘဏ်အတွင်းရှိချိန်တွင် အရောင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဘဏ်သို့လာရောက်သော Customer များအား ရိုးမဘဏ် Customer ဖြစ်လာအောင် ဝန်ဆောင်မှုများရှင်းပြခြင်း၊
•	ရည်ညွှန်းကွန်ရက်များဖန်တီးပေးခြင်း၊ လက်ရှိလုပ်ငန်းအဆက်အသွယ်များ၊ လက်ရှိဖောက်သည်များ၊ မိမိနှင့် ရင်းနှီးသောကွန်ရက်များနှင့် ဒေသတွင်းဈေးကွက်ဖော်ဆောင်မှု ဆောင်ရွက်ချက်များကို ပူးတွဲအသုံးချ၍ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ဘဏ်အတွက်အမြတ်အစွန်း ပိုမိုတိုးတက်ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ရန်၊
•	အပတ်စဉ်ဘဏ်ခွဲ၏ Weekly Sales Report များပြီးစီးပြီး Branch Manager ထံတင်ပြခြင်း၊ Sales ရောင်းချရန် ပြင်ဆင်မှုများလဲပြုလုပ်ရမည်၊
Customer ဝန်ဆောင်မူ (၂၀ %)
•	Customer အတွေ့အကြုံတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် အပြောင်းအလဲများအတွက်အကြံပြုခြင်း၊
•	ဘဏ်အတွင်းနှင့် ဘဏ်အပြင် Customer ဝန်ဆောင်မှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုပြုခြင်းဖြင့် Customer အတွေ့အကြုံအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊
•	Customer နှင့်ပက်သတ်သောကိစ္စရပ်များနှင့် အရေးကြီးသော (သို့) မဖြေရှင်းရသေးသောကိစ္စရပ်များအား အထက်လူကြီးသို့ အကြောင်းကြားခြင်း၊
•	Customer များအတွက်သွက်လက်တက်ြွကသော အရောင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်ရင်းနှီးဖော်ရွေသော အတွေ့အကြုံ ပေးသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးရန်၊
ဝန်ထမ်းရေးရာ (၁၀ %)
•	Customer များနှင့် ကာလရှည်ကြာဆက်ဆံရေးများ တည်ဆောင်ခြင်း၊
•	Customer များ၏ အကြံပေးချက်ကိုရယူခြင်းနှင့် အခြားဘဏ်၏အရောင်းအဖွဲ့များကိုကြည့်၍ တိုးတက် အောင်ပြုလုပ်ခြင်း (ဥပမာ - Sales cycle approach, product, process, pricing ၊ ပြိုင်ဘက်အချက်အလက်) နှင့် သက်ဆိုင်ရာသို့ အကြံပြုချက်ပေးခြင်း၊
•	Customer များနှင့် Team Members များ၏ဆွေးနွေးချက်နှင့် အကြံပေးချက်များအားအခြေခံပြီး လုပ်ငန်းခွင် ဝန်းကျင်တိုးတက်ကောင်းမွန်ရန်အတွက် ဝန်ထမ်းများမှ တက်တက်ြွကြွကပါဝင်ခြင်းများရရှိအောင်ပံ့ပိုးခြင်း၊
လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းများ (၁၀ %)
•	လုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဘဏ်၏သတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ကိုက်ညီအောင် လုပ်ဆောင်ခြင်း၊
•	ဘဏ်အတွင်းချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစဉ်းကမ်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိ/မရှိကို လိုအပ်သလိုစစ်ဆေးရန်၊
•	လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် အရောင်းလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရာတွင် ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတို့မှ သတ်မှတ် ထားသောစည်းမျဉ်းများ၊ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီအောင်သေချာစွာလုပ်ဆောင်ရမည်၊
•	ဘဏ်၏ချမှတ်ထားသောစည်းကမ်းအတိုင်းလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ Guidelines များအား အလုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင် ရင်းချမှတ်ခြင်း၊
(Personality & Character)
•	ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်သူ (Customer ပြဿနာများကို အခင်အမင်မပျက်၊ မျှမျှတတကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ရမည်)၊
•	အလုပ်တာဝန်များကို ပြီးစီးအောင်လုပ်နိုင်ရမည်၊
•	တက်တက်ြွကြွကနှင့် လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ရှိရမည်၊
•	စီးပွားရေးအမြင်ထက်မြက်မှုနှင့် Customer ၏ အမြင်ဘက်မှ နားလည် နိုင်ရမည်၊
•	အဖွဲ့အစည်းနှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး အချိန်ကိုကောင်းမွန်စွာစီမံ နိုင်ရမည်၊
(Education & Special Training)
•	ဘဏ်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူကို ပိုဦးစားပေးပါမည်၊
•	ဘဏ်၏ှSales နှင့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ ဦးစားပေးပါမည်၊
•	Sales မှတ်တမ်းများ ခြေရာကောက်နိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ Targets မှီအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည့် အရည်အချင်းရှိရမည်၊
•	Customer အများနှင့် Sales/Marketing အတွေ့အကြုံရှိသူ၊
•	အပြောအဆို၊ အရေးအသား၊ Typing ကောင်းရမည်၊
•	စေ့စပ်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် Sales အကြောင်းသိရမည်၊
•	Bank နှင့် သက်ဆိုင်သော/ Market အသိပညာလဲရှိရမည်၊
•	ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာနိုင်သောအရည်အချင်း၊ Data ကို အခြေခံပြီး အလုပ် လုပ်နိုင်ရမည်၊
•	အပြောင်းအလဲနှင့်အခွင့်အရေးတွေကို လက်ခံနိုင်ရမည်၊
•	Computer skill မှတ်တမ်းတင်နိုင်ရမည်၊ Transactions များကို အသင့် ရှိသော IT နည်းပညာဖြင့် စာရင်းသွင်းနိုင်ရမည်၊
Assistant Manager - Sales & Retail Store Hafary Myanmar - Leading Surfacing Materials Retail Sale And Marketing Manager (Male Only) MMTM (Myat Myittar Mon Co.,Ltd.) Sales Manager - Retail(Traditional) Broadway Int'l Co.,Ltd. Retail Sales Representative TOA Paint Sales Manager Sampar Oo Industries Co. Ltd. Sales Manager Max Myanmar Manufacturing Co., Ltd. Senior Sales Manager SHWE TAUNG REAL ESTATE Corporate Sales Manager (Mandalay Branch) MyTel Sale Manager Ammon Consulting (Myanmar) Co., Ltd Territory Sales Manager MyTel Area Sales Manager (Magway Branch) MyTel Sale And Marketing Manager HPTAriane Limited Head Of Sales HRINC.Myanmar LTE Broadband Sales Manager Fortune International Limited Sales & Marketing Manager Capital Diamond Star Group Sales Manager (Agriculture Heavy Machinery) IME International Co.,Ltd